Ciidamada Mujaahidiinta Oo Beegsaday Gaadiid Ku Socdaalayey Wadada U Dhexeysa Nairobi iyo Mandheera. – Calamada.com
Ciidamada Mujaahidiinta Oo Beegsaday Gaadiid Ku Socdaalayey Wadada U Dhexeysa Nairobi iyo Mandheera.
Wararka naga soo gaaraya gobolka NFD ee ku hoosjira gumeysiga dowladda Kenya ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta ay barqanimadii maanta weerar kamiin ah u dhigeen laba gaari oo bas ah oo ku socdaalayey wadada u dhexeysa Nairobi iyo Mandheera, Iyadoona halkaas uu ka dhashay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in weerarka lagu bartilmaameedsaday laba gaari oo Bus ah iyo ciidamo Ilaalo ah oo galbinayey gaadiidkaas, Islamarkaana halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo dhexmaray Mujaahidiinta iyo ciidamadii ilaalada ahaa.
Sarkaalkan ayaa noo sheegay in ugu yaraan lix ruux lagu dilay weerarkaas, sidoo kalena lagu dhaawacay ilaa 30 ruux oo kale. Sidoo kale dadkii rakaabka ahaa iyo ciidamadii kale ee ka bad-baaday weerarka ayaa ku firxaday deegaanada howdka ah, Iyadoona dhaawacyo kala duwan la gaarsiiyey magaalada Mandheera.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah silsilado howlgalo ah oo dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay ay Mujaahidiintu ka fulinayeen gobolada NFD iyo jaziirada Lamu ee gudaha Kenya kuwaas oo lagu beegsanayey saliibiyiinta Kenya.
Todobaad ka hor ayey ahayd markii weerar midkan la mid ah lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Kenya oo galbinayey gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya.
Weerarkaas waxaa lagu dilay ugu yaraan shan Askari, afar kalena waa lagu dhaawacay sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab.
Weerarkan waxa uu yimid xilli maalintii shaley dowladda saliibiyada ah ee Kenya ay muwaadiniinteeda gaalada ah kaga digtay in ay ku safraan wadada u dhexeysa Nairobi iyo Mandheera inta lagu gudajiro bisha barakeysan ee Ramadaan sababo ku aadan cabsi laga qabo in Mujaahidiinta ay halkaas ka fuliyaan weeraro ka dhan ah Nasaarada Kenya.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 26-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Darsiga 26-aad Ee Ù…Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª Ø±Ù…Ø¶Ø§Ù†ÙŠØ©.